Ny tombony azo avy amin'ny biogas | Green Renewable
Ny tombony azo avy amin'ny biogas
Adriana | | biogaz, Angovo azo havaozina, Trano maintso, Tontolo_iainana
Biogas dia fomba ekolojika hiteraka mandatsa-dranomaso. Izy io dia novokarin'ny famoahana ny fako na ny zavatra biolojika. Ny teknolojia takiana mba hahafahana mamokatra biogaz izany no antsoina biodigester ary tsotra be izy io satria misy efitrano misy ny fako biolojika toy ny poti-tsakafo, ny voly, ny zezika, sns. bakteria anaerobika izay ireo manala baraka ilay raharaha rehefa afaka fotoana fohy dia avadika ho lasa metanina.
Ity entona ity dia azo ampiasaina amin'ny fanafanana, fandrahoana sakafo ary hetsika hafa toa ny gazy voajanahary.
Ny tombony dia mamela anao hampihena ny isan'ny fako matevina monisipaly, tsy mamokatra efitrano fambolena ary azo havaozina izy ireo.
Ity teknolojia ity dia ara-toekarena ary tena ilaina amin'ny sekoly, lakozia ao amin'ny fiarahamonina, orinasa indostrialy sy fambolena, indrindra ho an'ireo faritra izay tsy ahatongavan'ny gazy voajanahary avy amin'ny tamba-jotra.
Azo ampiasaina amin'ny fampiasana an-trano any an-tanàn-dehibe ihany koa fa ilaina ny fananana fako tsy tapaka mba hiteraka gazy.
Of the fako biolojika azo atao ny mamokatra herinaratra, ka izay no loharano manan-danja izay lanilany foana.
Vahaolana lehibe amin'ny famatsiana tolotra herinaratra sy solika amin'ireo tanàna kely sy tanàna lavitra izany.
Inona no takiana amin'izany Angovo hafa Ny fahombiazana dia ny fampahafantarana ny mponina ny maha-zava-dehibe ny tsy fanariana azy ireo fako biolojika fa ny fanomezana azy amin'ny biodigesters mba hiasa.
Ilaina ny fiaraha-miasa amin'ny fiarahamonina mba hiasa satria ny fianakaviana na vondron'olona vitsivitsy dia tsy ampy hamokatra fako betsaka hamelomana ny biodigester.
Zava-dehibe ny fanovana ny fitondran-tenantsika sy ny fanampiantsika raha misy zavamaniry biogas eto an-tanànantsika.
Tandremo fa ny ampahany lehibe amin'ny fitaovana izay heverinay fa fako dia tena akora afaka manome compost, gazy na herinaratra ho antsika.
Betsaka ny traikefa mahomby eran'izao tontolo izao momba ny fampiasana biodigesters hanaovana gazy.
Any Eropa fotsiny dia misy farafahakeliny 60 ny zavamaniry fitsaboana fako.
Ity iray ity fahefana Azo havaozina sy madio tanteraka izy io, noho izany dia tena miara-miasa amin'ny fanatsarana ny tontolo iainana amin'ny fampiasana an'io karazana haitao io.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Fanavaozana maintso » Biofuel » biogaz » Ny tombony azo avy amin'ny biogas
violetta1979 dia hoy izy:
TSARA TSARA ITY TALOHA ITY satria manampy ahy be dia be amin'ny asako…. + USOSDELBIOGAS
Angovo geothermal eto amin'izao tontolo izao
Firenena mahantra sy angovo azo havaozina